८ अर्बको सीइओ भन्दा १६ अर्बको डिपुटी सीइओ हुनुराम्रो हुन्छ - Aathikbazarnews.com ८ अर्बको सीइओ भन्दा १६ अर्बको डिपुटी सीइओ हुनुराम्रो हुन्छ -
पछिल्लो समय बजारमा बिग मर्जको कुरा आयो । यो साच्चै आवश्यक थियो ?
हाम्रो देशमा २८ वटा कर्मशियल बैंक र जनसंख्या करिब २ करोड ८०÷९० लाख छन् । त्यस हिसाबले करिब १० लाख जनताको लागि एउटा वाणिज्य बैंक छ । हामी भन्दा १० गुणा ठुलो छ बंगलादेश । बंगलादेशमा प्रति वाणिज्य बैंक ३० लाख जनताको सेवा गर्छन् । उनीहरुकोमा ३० लाख हामीहरुकोमा १० लाख । पाकिस्तानमा प्रति बैंक ४४ लाख छ । भारतमा १ करोड ६० लाख जनताको लागि एउटा बैंक छ ।
भारतको हिसाबले हेर्ने हो भने त नेपालमा जम्मा दुईवटा बैंक भए पुग्छ । तर पनि १० लाख जनताको लागि १ बैंक धेरैनै भएको हो । राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक पनि मिसाउने हो भने सात लाख ४३ हजार जनताको लागि एउटा बैंक हुन्छ । अब शाखाको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रोमा प्रति एक लाख जनताको लागि १६ वटा शाखा (क, ख र ग बैंक तथा वित्तिय संस्था) छ हाम्रो देशमा गत वर्षको चैत्रको डाटा अनुसार । यो साउथ एसियामा राम्रो नम्बर हो । तर १ लाख जनताको लागि १६ वटा शाखा भन्दा हाम्रो वित्तिय पहँच त निकै राम्रो भएको रहेछ भनेर धेरै उत्साहित हुनु जरुरी छैन ।
किनभने यो १६ वटा कसरी भयो भने २८ वटा कर्मशियल बैंकको शाखा र ११ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको शाखा समेत गरेर काठमाडौको न्यूरोडमा मात्रै ३९ वटा शाखा भए, पोखरा, बुटवल, बीरगंज, विराटनगर जस्ता नेपालका जतिपनि ठूला ठूला शहरहरु छन् । यि सबैमा पनि त्यस्तै प्रकारको शाखा भएर यो १६ वटा पुगेको हो । जनता बैंकको हिसाबले भन्नु हुन्छ भने म जताजतै जान चाहन्छु । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म हिमालदेखि तराईसम्म जताततै अव आउने ५÷७ वर्षमा जान चाहान्छु । अब म मात्रै नभएर अरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि त यो योजना बनाएका होलान । त्यस्तै खालको रणनीति बनाएका होलान् । यसरीनै जाने हो भनेदेखि त शाखाहरु त बढ्दै जाने भए । गएको ५ वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै कुरा गर्ने हो वाणिज्य बैंकहरुको शाखा दोब्बर भएको छ । असार २०७१ मा १५४७ शाखा थिए भने अहिले चैत्र २०७५ मा आउँदा यसको संख्या बढेर ३३०९ पुगेको छ । डबल भन्दा बढि भएको छ । ए, वि, सि तिनवटैको हिसाब गरेर भन्ने हो भने २६०० बाट ४७३६ भएको छ ।
शाखाहरु बढ्दै गएको छ । असारमा ३०२३ थिए भने चैत्रमा आउँदा ३३०९ भएको छ । असारमा आउँदा यो नम्बर अझ थपिने छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष त्यो भन्दा अगाडी २०७४ मा २२७४ शाखा थिए भने कर्मशियल बैंकको अहिलेको वर्षमा ३०२३ रहेको छ । झण्डै झण्डै ८०० शाखाहरु थपिएका छन् । त्यसकारणले गर्दा हरेक वर्ष ७÷८ सय शाखा थपिदै जाने हो भने हामीले के प्राप्त गछौं ? यसले गर्दा रिक्स मात्रै बढ्ने हो । अनुभवि कर्मचारीको खाँचो छ । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा गएको छ । अर्को बैंकबाट अर्को बैंकमा गएको छ । अनुभव कम छ । पद चाहि उसले ठूलो लिईरहेको छ । यसले गर्दा हाम्रो अप्रेशन रिक्स बढ्दै गईरहेको छ । यि विभिन्न कारणहरुले गर्दा खेरी यो मर्जर हुन जुरुरी छ भन्ने हाम्रो बैंकलाई लागेको हो ।
बिग मर्जर वा फोर्सफूल मर्ज अथवा २० अर्ब पूँजी पु¥याउ त्यसमा राईट शेयर दिन पाउँदैनौ भन्दै गर्दा अहिले बैंकहरुमा आएको तलरता अभाव र तपाईले भने जस्तो दक्ष कर्मचारीका अभाव नहोला भन्न सकिन्न त्यहाँ पनि हुन्छ त रिक्स होइन र ?
पक्कै पनि यो कर्मचारीहरुको तानातान जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर्मचारीहरुकै कुरा गर्नुस् अथवा डिपोजिट, कर्जाकै कुरा गर्नुस् । यसमा साच्चै नै सुधार त पक्कै हुनेछ । तर, सबै समस्याको समाधान मर्जर पनि होइन । यसले वित्तिय क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्नलाई, लागतहरु घटाउनको लागि यसले पक्कै सहयोग गर्छ र यो भोली नै हुने पनि होइन एक वर्ष डेढ वर्ष समय लाग्छ ।
सिसिडि रेसियो र तरलता अभावको समस्या छन् यसलाई मर्जरले सहयोग गर्ला त ?
तरलता अभावको समस्या मर्जरले समाधान गर्ने होइन । समस्या यो अर्को हो मर्जर उपाय अर्कौ हो । किन हाम्रो सिसिडि रेसियो टाईट भईराखेको छ ? ब्याजदर किन बढिरहेको छ भन्दा राजनीतिक स्थिरताको कारण कर्जाको माग बढेको छ । तर, त्यो अनुसारको डिपोजिट बढ्न सकेको छैन । यो राम्रो खालको च्यालेन्ज हो । यसलाई राम्रो खालको समस्या भन्नुहोस् । विगतमा डिपोजिट बढ्थ्यो । कर्जा लिने मानिस हुदैनथे । पैसा फालाफाल हुन्थ्यो । ब्याजदर घट्थ्यो । २ प्रतिशत बचत ब्याजदर थियो । १० प्रतिशत मुद्रा स्फिति कर्जा व्याजदर थियो । त्यो राम्रो पक्ष होइन ।
अहिले यो समस्या होइन यसलाई चुनौती भन्नुपर्छ । यो बढेको कर्जा मागलाई कसरी पुरा गर्ने । यसको लागि हामी सबै सरकार, राष्ट्रबैंक, बैंक, लगायत प्राइभेट सेक्टर सबैले काम गर्नुपर्छ । जसको लागि राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जाको रकम बढाएको छ । हामीहरुले यसलाई अझ बढाउन पर्छ, भनेर सुझाव दिइरहेको छौं । विदेशबाट लोन ल्याउने बाटो खोलिदिएको छ । अब प्राइभेट सेक्टरले पनि कारोबार गर्ने भन्ने वित्तिकै कर्जा लिनुपर्छ र कर्जा भन्ने वित्तिकै बैंकमै भर पर्ने होइन । अब प्राइभेट सेक्टरले बिस्तारै बिस्तारै इक्यूटी पनि ऋण पनि अब सिधै पुँजी बजारबाट लिने गर्नुप¥यो । बैंकको मात्र भर परेर भएन । यदि बैंकले दिएन भने पुँजी बजारबाट लिन सक्ने क्षमता बनाउनु प¥यो ।
पछिल्लो बजेटमा निश्चित टनओभर भएका कम्पनीहरु स्टक मार्केटमा गएर लिस्टङ्ग हुनुपर्छ भनेर आईसकेको छ । प्रक्रिया पनि सुरुभईसकेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले पुँजी बजार र बैंक दुबैबाट ऋण उठाउने अवसर पाउछन् । कहिलेकाँही हामीहरुले देखेका छौं । अन्य देशमा पुँजी बजारमा कम्पनीहरुले जारी गरेको बण्ड बैंकहरुले खरिद गरेका छन् । यो एक रातमा हुने काम होइन । यसलाई समय पनि लाग्छ । जब जब हाम्रो अर्थव्यवस्था र पुँजी बजार म्याच्योर हुँदै जान्छ । यसका पात्रहरु पनि म्याच्योर हुँदै जानेछन् । अरु देशको अर्थतन्त्रमा भएको छ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पनि होला ।
यति धेरै उद्योगधन्दाहरु खुले । कर्जाको माग बढेको छ । धेरै बैंकहरु हुँदा त छानी छानी कर्जा लिन पाइन्थ्यो होला । तर, अब बैंकहरु कम भएपछि बैंकहरुको एकाधिकार त हुने होइन सीइओ साब ?
यसमा सरकार र राष्ट्र बैंक सजक देखिन्छ । वित्तिय सुदृढिकरणको नाममा एकदमै कम बैंक बनाएर प्रतिस्पर्धा नै नहुने बातावरण हुनु हुँदैन भन्नेमा सरकार र राष्ट्र बैंक एकदमै सजक भएको देखिन्छ । कतिपय विज्ञहरुले हाम्रो देशमा १०÷१२ वटा भन्दा बढि बैंक चाहिँदैन भन्ने कुराहरु राखेका छन् । त्यो भनेको अहिलेको ठिक आधा हो । यस विषयमा हामी भन्दा सरकार र राष्ट्र बैंक धेरै विज्ञ हुनुहुनछ । उहाँहरुले यस विषयमा पहिल्यै नै सोचेको हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ उहाँहरुले प्रतिस्पर्धा नै नहुने वातावरण सृजना गर्नु हुने छैन ।
मर्जरले उच्च तहका धेरै कर्मचारीहरुको रोजीरोटी नै खोसिएला जस्तो देखिन्छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
सानो तहका कर्मचारीहरुलाई कुनै समस्या हुँदैन । माथिल्लो तहका कर्मचारी खासगरी सीइओहरुलाई केही फरक पर्नसक्छ । म चाहिँ सीइओ साथीभाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यसलाई इगो इस्यु नबनाऔं । दुईवटा बैंकमा दुई वटा सीइओ हुन्छ भने मर्जर भएपछि एउटा सीइओ अर्को सिनियर डेपुटी सीइओ अथवा डेपुटी सीइओ भएर गरौं, यसलाई इगो इस्यु नबनाउँ । ८ अर्बको बैंकको सीइओ हुनु र १६ अर्बको बैंकको डिपुटी सीइओ हुनु उस्तै हो ।
ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक नेपाल मर्जर भएपछि कर्मचारीको संख्या करिब ३१÷३२ सय पुग्लान । कसरी अगाडी बढाउनुहुन्छ ?
हाम्रो दुईवटा बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी दुबै बैंक सबैकुरामा एकदमै चलक छौं । जसले गर्दा हाम्रो यो मर्जरको सहमति एकदमै छिटो सम्भव भएको हो । हामी ठूलो काम गदैछौ भने सानो काममा अलमलिनु हुँदैन । साना तिना समस्याहरु आउछन् भनेर नै व्यवस्थापन चाहिएको हो । त्यसकारण हामीहरु सानो कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने हो । अझ इगो जस्तो चिजलाई अगाडी ल्याउनै हुँदैन । हामी लचक भएर अगाडि बढ्नपर्छ । यो बैंकिङ्ग सेक्टरमा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा यही हुनुपर्छ । जहाँसम्म कर्मचारीहरुको कुरा छ । त्यसमा कुनै पनि समस्या हुनेछैन । दुबै बैंकहरु वाणिज्य बैंक भएका र मर्जरमा राम्रो अनुभव भएकाले कुनै पनि क्षेत्रमा खासै फरक पर्नेछैन ।
मौद्रिक नीतिमा संचालकको उमेर हदको कुरा आउने संकेत देखिन्छ । अर्को कुरा ग्रुपहरुको बैंकमा कर्पोरेट सुसाशनको कुरा अलि फरक हुन्छ भन्ने सुनिन्छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
मेरो हिसाबले अरु देशहरुको तुलनामा हाम्रो नेपालमा संस्थागत सुसाशन धेरैनै राम्रो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्रमा कुनै पनि गडबड ग¥यो भने जेल पनि जाने पर्न सक्र्छ है भन्ने म्यासेज कडा रुपमा दिएको छ । कतिपय मानिसहरु जेल पनि गएका छन् । हामीसंग मेकानिजम छन् ।
आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिनै पाइदैन । अरु कतिपय देशमा जस्तो एउटा बैंकको संचालकले अर्को बैंकबाट ऋण लिने र नतिर्ने अनि कारवाही पनि नुहने जस्तो वेतिथि हाम्रो देशमा छैन । एक वर्षसम्म कर्जा नतिरेमा अनिवार्य रुपमा ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यि सबै कारणहरुले गर्दा हामी सुध्रिढ छौं । हामीले अब केही सुध्रिन पर्दैन भन्ने चाहि होइन । केही कमी कमजोरीहरु होलान् । त्यसलाई सुधार गर्दै जाने हो । हामीहरु सिक्दै र सिकाउँदै जाने हो ।
जनता बैंकको वित्तिय अवस्था चाँही कस्तो छ नि ?
तेश्रो त्रैमासिकमा हाम्रो नाफा १ अर्ब नाघि सकेको छ । डिपोजिट र लोनमा २५÷२६ प्रतिशत ग्रोथ भएको छ । बैंकले निकै राम्रो प्रगति गरेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकसंग मर्जरको सहमतीमा सेयर रेसियो कति माग्नु भएको छ ?
हामीले मर्जरको सहमति गर्नु भन्दा अघि एक स्वतन्त्र चार्टड एकाउटेण्टबाट प्रारम्भिक मुल्याङ्कन गराएका थियौं । मोटामोटी ८५ को स्वाप रेसियोको आधारमा सम्झौता भएको छ । अब फुल अडिटले के भन्छ । यसमा १० प्रतिशतसम्मको फरक प¥यो भने यही ८५ मा नै मिल्ने समझदारी भएको छ । तर, १० प्रतिशत भन्दा फरक भयो भने डिडिए ले नै हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण काम सिस्टम माइग्रेसन हो ।
जनता बैंकमा फ्रेक्सक्यूव छ र ग्लोबल आईएमईमा फिनाकल कोर बैंकिङ्ग सफ्वेयर छ । फ्रेक्सक्यूवमा भएको डाटालाई फिनाकलमा सार्दैछौं । किनभने नेपालमा फेल्सक्यु युउज गर्ने जम्मा ३ वटा मात्रै छन् । फिनाकल युउज गर्ने बैंकहरु धेरै छन् । १४२ वटा शाखा र ७ लाख भन्दा बढि ग्राहक भएको डाटालाई माइग्रेट गर्ने काम अलि गाह्रो र महत्वपूर्ण काम हो । यसले अलि समय लिन्छ होला । हाम्रो कोसिश यी सबै कार्य ४ महिना भित्र पुरा गर्ने हो ।
मर्जर पछि तपाई ग्लोबल आईएमई बैंकको सीइओ बन्नुहुन्छ । तर, त्यो बैंकमा पहिला देखिनै सीइओहरुको धेरै विवादहरु आईरहेका छन् । तपाईले कसरी सम्हाल्नुहुन्छ ?
यो प्रश्नमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहान्न । विगतमा के भयो म त्यसमा फोकस पनि गर्दिन । हामी अगाडी हेर्दै जाने हो । म मेरो १०० प्रतिशत दिनेछु । मेरो कामबाट सबैलाई रिजाउने कोसिस गर्नेछु । म आशा गर्दछु, कि हामीहरुले सबैबाट सहयोग र साथ पाउने छौं र हामीले आँटेको काम छोटो समयमा नै प्रभावकारी रुपमा पुरा गर्न सफल हुनेछौं ।आर्थिक बजार मासिक
३५ लाख ठगीको आरोप यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पक्राउ
सुजुकी Happy New Car ग्राहक योजना सुरु
डिआईजी विश्वराज पोखरेलको रानीपोखरीमा सरुवा